Global Voices teny Malagasy » Tonizia: Ho Fahatsiarovana Ilay Gadran’ny Aterineto Voalohany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Janoary 2018 5:24 GMT 1	 · Mpanoratra Lina Ben Mhenni Nandika (fr) i Manuel Naudin, Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Tonizia, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona
(Nivoaka tamin'ny 17 marsa 2009 ny lahatsoratra teny anglisy)
Hahatsiaro hatrany an'i Zouhair Yahiaoui  [en] ho olona iray izay nanokana ny fiainany amin'ny ady ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra ireo mpikatroka Toniziana.
Zouhair Yahyaoui, Ettounsi na Le Tunisien no anaram-panoratana, nahazo mari-pahaizana momba ny siansa are-toekarena sy mpanao gazety amin'ny aterineto. Tamin'ny 2 jona 2000,nanasa ireo mpamaky ny tranonkalany TUNeZINE  izy hifidy raha toa ka “repoblika, fanjakana, valan-javaboary na fonja” i Tonizia. Fotoana fohy taorian'izay izy dia nosamborin'ny mpitandro filaminana nitafy toy ny sivily, ary tsy misy taratasy fisamborana azy raha tao anaty cybercafé.
Noafahana  i Zouhair Yahyaoui tamin'ny volana Novambra 2003 rehefa nigadra nandritra ny 18 volana, ary tamin'ny 13 martsa 2005 dia maty  noho ny areti-po teo amin'ny faha-36 taonany izy. Nandritra ny fitazonana azy tany am-ponja, nanao fitokonana tsy hihinan-kanina izy hanoherana ireo fepetra izay nitazonana azy ary nilaza ireo mpanohana azy fa nampijaliana ihany koa izy.
Ho fahatsiarovana ny tsingerintaona fahaefatry ny nahafatesany, mampahatsiahy antsika mikasika ny gadran'ny aterineto voalohany ao Tonizia ny tontolon'ny bilaogera Toniziana manohana ny famahanam-blaogy malalaka  :
Efa-taona lasa izay, nandao antsika taorian'ny fijanonan'ny fony tampoka i Zouhair Yahyaoui, ilay mpamorona ny tranonkala Tunezine, raha mbola teo amin'ny fahatanorany izy.
Nogadraina izy tamin'ny lohataonan'ny taona 2002 ary namita ireo adidy rehetra tamin'ny fanoloran-tenany hiarovana ny fahalalahana. Nampiasa teknolojia maoderina amin'ny aterineto izy, izay nitarika azy ho mariky ny tolona tao amin'ny tranonkala. Mijanona ho maodely iray ho an'ireo mpikatroka sy ireo mpanandra-tenin'ny demaokrasia izy. Imbetsaka izy no nanao fitokonana tsy hihinan-kanina mba hitakiana ireo fepetra hiainan'ireo voafonja, saingy tsy niraharaha ny fangatahany ny mpitantana ny fonja. Niharatsy anefa ny toe-pahasalamany noho izany.
Ary toa niharatsy ny toe-draharaha hatramin'ny nahafatesan'i Zouhair Yahyaoui. Mitatitra ny famoretana an'aterineto any amin'ny fireneny amin’ity lahatsoratra ity  ilay bilaogera toniziana sady talen'ny vohikala Global Voices Advocacy  Sami Ben Gharbia , .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/16/113372/
 Zouhair Yahiaoui: http://www.pen.org/page.php/prmID/429
 ny tontolon'ny bilaogera Toniziana manohana ny famahanam-blaogy malalaka: http://yatounes.blogspot.com/2009/03/blog-post_1305.html
 ity lahatsoratra ity: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2008/08/20/silencing-online-speech-in-tunisia/